Madaxwayne Kuxigeenka Somaliland oo Xariga ka Jaray Biyoxireen – Radio Daljir
Madaxwayne Kuxigeenka Somaliland oo Xariga ka Jaray Biyoxireen
Abriil 25, 2017 4:41 b 1
Madaxwayne kuixigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Saylici ayaa maanta xariga kajaray biyo xireen laga hirgaliyay duleedka waqooyi ee magaalada Hargaysa halkaasi oo xiliyada roobka ay biyo badan ay maraan.
Mahsruuca biyo xireenka ayaa waxaa maalgeliyay dowladda Imaaraatka Carabta.
Madaxwayne kuxigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Saylici ayaa uga mahadceliyay dowladda Imaaraatka Carabta oo mashruucan ku deeqday gaar ahaana hay’adda Khaliifa Bina Zaayid ee Al-nahyaan oo fulisay mashruuca.
Waxaa uu sheegay inay wax badan katari doonto baahida biyaha ee bulshada ay qabto.
Abaaraha soo noqda ee Soomaaliya ayaa waxaa sabab u ah xaalufka iyo biyaha roobka oo aan lahayn biyo xireeno lagu qabto.
Puntland oo Ka Hadashay Xilliga La Qaadayo Imtixaanka Shahaadiga ah (DHEGAYSO)
Barlamaanka oo Dhegaysanaya Mooshin Ka Dhan ah DFS iyo Maamul Goboleedyada (Daawo)
hudayfi abdirashiid abdirahman numberka 0907815465 3 years ago
masha allah waa arin lagu farxo in maamul goboleed ka somaliland uu sameeyo biyo xireen weyn oo lagu qabanayo biyaha roobka waa na arin ku dayasho mudan in la iskaga daydo umada na faa’iido u leh waxaan u soo jeedin maamul goboleed yada kale in ay biyo xireeno sameeyaan oo dadka iyo duunyada ba lagu badbaadiyo